Zụta Ụdị Altrenogest (850-52-2) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Altrenogest ntụ ntụ
Rating: SKU: 850-52-2. Category: Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Altrenogest ntụ (850-52-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Okpokoro uhie a na-enyekarị ndị na-eto eto nọ na ụlọ ọrụ equine dị ka ihe eji eme ihe-iji ihe eji eme ihe iji gbochie omume mmekọahụ. N'ime ọmụmụ ihe a, a na-enyere ndị na-azụ ịnyịnya ibu 2-yr-ochie Quarter ọzụzụ dị na nchịkọta nke oge elekere (0.044 mg / kg BW kwa ụbọchị) iji chọpụta mmetụta dị na omume mmekọahụ / mkparịta ụka ike, profaịlụ testicular, na profaịlụ proro hormone.
Igwe vidio dị ukwuu
Okpokoro uhie isi agwa
aha: Okpokoro uhie
Usoro Molecular: C21H26O2
Molekụla arọ: 310.43
Melt Point: 116 ka 120 Celsius C
Ọdịdị uzo dị iche iche na-esi ísì ụtọ
COMMON BRAND (S): Altrenogest ntụ ntụ
Aha (S): Regumate, Matrix, Regumate ntụ ntụ, Matrixpowder
Utu uzo di iche iche
Otutu uzo di iche iche, nke bu progestagen, bu ihe omuma 17a-allyl nke ogwu trenbolone nke puru ibu nke yiri nke nwoke nwoke na nwanyi, testosterone. A na-eji eriri dị iche iche eme ihe n'ụzọ dịgasị iche, na ogologo oge, na ịgba ịnyịnya ịnyịnya. Nke a na-eme iji gbanwee cyclicity ịmụ nwa, si otú a na-eme ka ha nwekwuo tractable ma kwadoro maka ọzụzụ na asọmpi. Otú ọ dị, nchịkwa dị ogologo anaghị adabere na ndị ọkachamara. N'ọtụtụ mba, a na-edebanye aha ọgwụ ahụ naanị maka nchịkwa ọnụ na-edere maka 10 ụbọchị maka nzube nke ịmepụta oval oestrus na ngwụsị oge mgbanwe nke usoro oestrus. Altrenogest raw ntụ ntụ na-egbochi oestrus omume na mares n'ime 2-3 ụbọchị mmalite nke nchịkwa. Mmetụta nke nchịkwa ogologo oge na-ejupụta Altrenogest ntụ ntụ bụ ihe a na-amaghị, karịsịa maka ndị na-eji asọmpi. Tụkwasị na nke a, ọ pụtaghị ma ọgwụ ahụ ọ na-enwe mmetụta ọ bụla na-agba ume ma ọ bụ dị ịrịba ama na ịnyịnya.
Ya mere, a na-eme nnyocha iji nye nyocha nke mbido nchịkọta oge ogologo nke Altrenogest raw ntụ ntụ na-emekarị ka ọ bụrụ ndị na-elekọta mmadụ, ndị na-ahụ maka ozu na nke ahụ (BCS). E nwetara iri na abụọ nke anụ ndị a gwara ọgwa (Thoroughbred na Standardbred) site na onye ahịa ahịa na mpaghara. A na-edebe ụmụ anụmanụ na nri ịta nri dịka otu otu maka ngụkọta nke izu 20. Mgbe ịchọtara, ndị ọ bụla na-eji usoro nlekọta ahụike eme ihe, gụnyere nchịkwa, nrịanwụ nke eze, nlekọta ụkwụ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. A nabatara ndị Mares ka ha nabatara ọnọdụ ọhụrụ maka izu anọ n'oge nke ha mere ka ha guzosie ike dị ka otu mmadụ, ha wee mara usoro usoro nhazi oge, dịka, a na-ejide ya, tụọ ya, tinye ya na nchịkọta, nchịkwa nke ọgwụ gwọọ site na sirinji. N'ime ogologo oge dum nke gụrụ akwụkwọ nri na-edozi nri. A na-atụle Mares na edere akara akara ugboro abụọ kwa izu.
Kedu ihe usoro nke Altrenogest ntụ ntụ
A na-ekwenye na nchịkwa anụ ahụ nke Altrenogest ntụ ntụ maka nkwụsị oestrus n'egwuregwu ịnyịnya na-abụ nke zuru oke na ọzụzụ ụfọdụ na-eme njem, ma a ga-enye ya ọtụtụ ọnwa n'oge asọmpi. Iji nyochaa ma Altrenogest raw powder nwere ihe anabolic ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ nke na-eme ka ịnyịnya bụrụ ihe na-adịghị mma, anyị nyochara mmetụta nke Altrenogest ntụ ntụ (0.044 mg / kg), nke a na-enye kwa ụbọchị maka izu asatọ, na-elekọta mmadụ nchịkwa, ego mmemme, njikwa anụ ahụ na ahụ mmadụ nke 12 sedentary mares. A kwubiri na nchịkwa nke ogologo oge nke Altrenogest raw powder na aro ọnụego a na-emekarị ka ọ ghara ịdị na-eme ka ndị mmadụ na-ejide onwe ha, na-ahụkarị ma ọ bụ ọnọdụ akara.
Kedu ka Altrenogest ntụ ntụ si arụ ọrụ
Na ahụmịhe anyị, Altrenogest ntụ ntụ adịghị enwe ike ịme ihe ọ bụla a na-ahụ anya banyere usoro ịgba ume nke mare. Ya mere, anyị nyochara 12 mares na Altrenogest raw ntụ ntụ iji chọpụta ihe mere ọ na-ejighị achịkwa okirikiri. A na - enye Altresogest ntụ ntụ maka 15 ruo ụbọchị 20, a nyochakwara ya maka ịzụlite mkpụrụ, ọkpụkpụ, na corpus luteum e guzobere n'oge ọgwụgwọ. Site n'iji ngwa ngwa na ultrasonography na redimmunoassay maka progesterone, anyị kwubiri na Altrenogest raw ntụ ntụ enweghị ike igbochi uto nke ụbụrụ nke na-eme ka ọ ghara ịmalite ịmụta nwa n'oge ọgwụgwọ ma ọ bụ karịa karịa ka a tụrụ anya ya mgbe ọgwụgwụ ọgwụgwọ gasịrị. Tụkwasị na nke ahụ, Altrenogest ntụ ntụ apụtaghị na ọ ga-ebelata ndụ ndụ nke corpo lutea nke e mere n'oge ọgwụgwọ; na 4 mares, nke a mere ka nkwụsi ike nke corpora lutea mgbe njedebe nke usoro ọgwụgwọ 15 a tụrụ aro. Nchọpụta ikpeazụ mere ka anyị chee na ọ bụrụ na e nyere ọgwụ prostitlandin ọgwụ na-egbu egbu na njedebe Altrenogest, ọ ga-abụrịrị na a na-ejikwa nlezianya na-achịkwa usoro okirikiri. Ihe nchoputa anyi mere gosiputara na ihe omuma anyi bu na Altrenogest uzo nwere ike ichota ichikota uzo nke uzo di iche iche, ma ekwesighi iji ya mgbe achuru uzo.
Uru nke nnukwu ntụ ntụ
A na-enye ntụ ọka ndị na-emepụta ihe dị iche iche (ALT), progestogen synthetic, na gonadotropins dị iche iche nye Swine Leukocyte Antigen (SLA) nke na-emekarị ka obere ovulation na obere obere ebe ọ dị. Ọmụmụ ihe 1, 15 ndị nwanyi na-azụ ụmụ nwanyị bụ njikwa (Group I, n = 5), nyere 15 mg ALT / ụbọchị maka 14 ụbọchị (Group II, n = 5), ma ọ bụ nye ALT nri ma mesoo ya ọrịa di na nwunye (1200) IU, im) na akụrụngwa nke mmadụ (500 IU, im) 24 h na 104 h, n'otu mgbe, mgbe ALT wepụrụ (Group III, n = 5). Ọmụmụ ihe 2, otu ìgwè pigs (I, n = 24; II, n = 11; III, n = 11) ka a na-emeso ndị na-amụ ihe na 1 ma e wezụga na ezì na Ntụle 2 (Group II na III) nọ na-amụ. A na-enyocha ụmụ anụmanụ niile na ọmụmụ abụọ ahụ laparoscopically ma ọ bụ site na 5-8 ụbọchị mgbe estrus iji chọpụta ọrụ ovarian. Uzo nke umu nke II na nke ato n'ile ihe omumu nke 2 bu ihe di iche iche nke omenala, nke aturu anya maka onodu na ogo embryos.
Enweghị ezi gosipụtara omume omume rụrụ arụ n'oge ọchịchị ALT. Ọ bụghị ụmụ anụmanụ niile gosipụtara omume ịla n'iyi mgbe ALT kwụsịrị. Mgbe ejikọtara data sitere na ọmụmụ abụọ ahụ, 2 nke 16 (12.5%) nke otu II na 6 nke 16 (37.5%) nke ezì nke III III gosipụtara igosi estrus guzo. Gbaso ALT with-drawal, ụmụ nwanyị na Otu II na III laghachiri estrus na 5.6 ± 0.3 na 5.8 ± 0.3 ụbọchị, n'otu n'otu (p> 0.05). A na - amụba nọmba Corpora lutea (p <0.05) site na ọgwụgwọ naanị (11.4 ± 1.8) ma e jiri ya tụnyere njikwa (6.9 1.3) ma mụbaa (p <0.01) iji ojiji nke gonadotropins (22.6 1.9) mee ihe. enwere ike ịpụta morula blastocysts nkịtị site na ụmụ nwanyị 14 22. ma, akpukpo ahu achotara na endometrium 5 9 10 pigs groups ii iii. Ọnọdụ a, nke a na-edekọ akụkọ ihe mere eme dị ka hyperplasia endometrial (ceh), dịgasị iche n'etiti ụmụ nwanyị, ihe omume ya pụtara afọ. nnabata a na-emeghị emeghị ka ọ bụrụ obere anụ ụlọ na-egosi na ọ bụ ọgwụgwọ orgonadotropin na-enweghị mmekọ.
Ọmụmụ ihe a na-egosi na ọgwụgwọ ALT nanị dị irè n'ịmekọrịta estrus ma nwee mmetụta bara uru na mmeghachi ọbara na SLA miniature pig. Ntinye nke ogwu gonadotropins na-eme ka o nwekwuo mmeghachi omume ọbara; Otú ọ dị, a na-ebelata mmetụta na ịdị ike nke àgwà obi ọjọọ. Iweghachite nke embrayo na-egosi na njikọta spam adịghị emerụ. Otú ọ dị, obere nkwụsịtụ na oge nwere ike ijikọta mmebi nke cymenta endometrium, nke nwere ike ịkpata ọnwụ na-amụba nwa na / ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ala nke nkwụsị.
Altrenogest raw ntụ ntụ Marketing
Ntụle ntụpọ Altrenogest
Ọmụmụ ihe a nyochare mmetụta nkwụsị na mmekọahụ na ike ike na seminal parameters na nwa na-eto eto n'ihi nchịkwa kwa ụbọchị nke Altrenogest powdera maka oge nke izu asatọ. A nyochakwara akụkụ ndị a mgbe oge mgbake nke izu asatọ (ụbọchị 111). Ugboro atọ n'ime ọmụmụ ihe ahụ (ụbọchị-9, 60 na 111), edere nha gụnyere oke, ntụgharị ihu na akara ahụ nke ụlọ ụkwụ. Stallions na usoro ọgwụgwọ abụọ ahụ adịghị iche na ịdị arọ, akara ahụ ma ọ bụ nha metacarpal na ọmụmụ ihe niile. Otú ọ dị, ntụgharị ihu igwe belatara (P <.05) na stallions a na-emeso na izu asatọ ma nọgide na-adị ala (p <.05) mgbe ịkwụsị post nke altrenogest raw ntụ ntụ (izu 16). ụkpụrụ maka ịgba gburugburu dị iche n'etiti usoro nlekọta nchịkwa 16. na-ebelata atụmatụ kwa ụbọchị spam (dsp) achọtakwara n'ime otu izu abụọ (p <.01) 16 (p <.05). nke a belata dsp nwere ike jikọtara ya na mgbada. ọdịiche dị iche iche nke spermatozoal na-abawanye ụba, isi (p <.009) ọdụ (p <.001) na-abawanye oge nchịkọta ikpe tupu izu asatọ.
Emere Stallions maka omume mmekọahụ na nke ime ihe ike site na iji ule ịkwa iko akọwapụtara ugboro atọ n'oge ọmụmụ (ụbọchị-12, 57 na 111). Akpadoro akparamàgwà site na ikpughere stallion na nne na-ejide aka na estrus maka oge nlere nkeji atọ. Oge Flehmen na oge belatara (P <.05) n'etiti altrenogest ntụ ntụ-emeso stallions na izu ụka asatọ. Ogologo oge ịkụda amụ na-ebelata (p <.08) izu asatọ na stallions a na-emeso. erection (p <.05) na ugboro (p <.005) belatara izu izu.
Ihe ndị a na-atụ aro na ịgwọ ndị na-eto eto na Altrenogest raw ntụ ntụ maka izu asatọ emetụtawo mmetụta dị iche iche n'omume mmekọahụ na ịkpa ike na mmepụta mkpụrụ. Ọtụtụ n'ime ihe ndị a adịghị alaghachi na-ekpe ikpe tupu izu asatọ ka a kwụsịrị ịgwọ ọrịa. A choro nyocha di iche iche iji nyochaa ikike nke ndi na-eto eto iji weghachite oge site na ihe ojoo nke Altrenogest ntụ ntụ dika egosiputara site na imebi libido, ihe ndi ozo na ihe omumu onu ogugu na akwukwo a.
Otu esi zụta Altrenogest ntụ ntụ si AASraw
Megestrol acetate ntụ ntụ